Ubuntu bungashiywa ngaphandle kwengcebo enkulu emhlabeni ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ubuntu bungashiywa bungekho amagugu amakhulu emhlabeni ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu
Izithombe ezinjengalezi zingayeka ukubakhona njengoba izehlakalo zesimo sezulu ziba zimbi ngokwedlulele. Izikhukhula, amagagasi okushisa, kanye neziphepho kuyisongo esicacile ebucikweni bomuntu, njenge 'Mona Lisa'.
Ngaphezudlwana nje kwengxenye yekhulu leminyaka eyedlule, ngo-1966, idolobha laseFlorence lathola ngezinsuku ezimbili ingxenye yesithathu yemvula yalo yonyaka, okwakuyinhlekelele yemisebenzi yobuciko eyi-14.000, izincwadi eziyizigidi ezi-3, amasonto angama-30, iminyuziyamu nemitapo yolwazi, ngaphezu kwabantu abangu-20.100 XNUMX, ikhulu labo elahlekelwa yimiphefumulo yabo. Ngabe lokhu kuzoba umcimbi ojwayelekile eminyakeni embalwa ezayo? Kungenzeka.
Esikwaziyo ngokuqinisekile yilokho okwenzekayo vele. Ngo-Agasti I-Uffizi Gallery, eseFlorence, kudingeke ukuthi ivalwe usuku lonke ngenxa yokushisa okuhlasele iYurophu. Futhi ngukuthi, ukube bebengakwenzanga, imidwebo ibizomane yonakale, ngoba badinga imvelo enama-degree angama-23 nomswakama ohambisanayo ongu-55%, kanti igumbi belingaphezu kuka-40ºC.
ISiphepho uHarvey sabeka engcupheni imidwebo, izithombe ezibaziwe kanye nezinto zobuciko ezingama-65.000 ezisuka eHouston Museum of Fine Arts. Ngenhlanhla, "iqoqo lonke lisephelele" ngokusho komqondisi wemnyuziyamu uGary Tinterow, kodwa akazolile. Ngakho-ke isivele yakha ibhilidi elisha elikwazi ukumelana neziphepho zesigaba sesihlanu.
Izimo zezulu ngokuqinisekile ziyoba namandla kakhulu njengoba iplanethi ifudumala, ngenxa yalesi sizathu, Iminyuziyamu eminingi ithatha izinyathelo zokuvikela imisebenzi yayo, njengokusebenzisa ukupakisha okungangeni manzi, ukuhlola izindlela zokuphuma, ukugcina imidwebo emazingeni aphezulu nokuvikela uhlelo lokupholisa umoya.. Lapha eSpain, iPrado Museum (iMadrid) ibonakala iphephe kakhulu; Kodwa-ke, uma kunesidingo, bazothutha imisebenzi bayigcine ezinqolobaneni ezikuleyo nkundla noma kwesinye isakhiwo, njengoba bebika.
Ngiyethemba lokho kwanele.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ubuntu bungashiywa bungekho amagugu amakhulu emhlabeni ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu
Intaba-mlilo iBali isizodubula
Kungani kuphuthuma ukubhekana nemiphumela yezempilo yokuguquka kwesimo sezulu?